Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Gumaysiga Itoobiya oo Bilaabay Ganacsiga Qaadka (Jaadka).
Ciidanka Gumaysiga Itoobiya oo Bilaabay Ganacsiga Qaadka (Jaadka).
Posted by Dulmane	/ November 7, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in musuq maasuqu uu kufiday dhamaan hay’adaha kala duwan ee xukuumada wayaanaha.
Sida xogta aan kuhelayno ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa kaalmaha hore kagalay musuq maasuqa iyo wax iswaydaarinta waxayna ciidamadu hada sitoos ah ugu howlan yihiin beec gaynta qaadka Oromia kabaxa kaas oo ka istaagay meelo badan oo lagayn jiray.
Wariyaha Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ee magaalada Addis Ababa oo amuurtan ukuurgalay ayaa sheegaya in ay ciidamada wayaanuhu siwayn ugu howlan yihiin iib gaynta qaadka ama jaadka oo Oromia, kaas oo dadkii kaganacsan jiray ay joojiyeen kadib markii colaad lakala dhex dhigay qoomiyadihii dariska iyo walaalahaba ahaa.
Sida uu wariyuhu sheegayo waxaa magaalooyinka waawayn ee Ogadenia iyo Gobolo kale oo Itoobiya lagu arkayaa ciidanka wayaanaha oo baabuurtooda kuqaadaya geedka Jaadka looyaqaano oo bilihii lasoo dhaafay colaado dhex maray qoomiyada Oromada iyo qoomiyadaha kale ee dariska ay yihiin.
Sumcad xumida ciidanka wayaanaha oo iyagoo labisan qaad iibinaya ayaa muujinaysa burburka xukuumada wayaanaha oo awoodi wayday in ay xakamayso ciidankeeda oo masuq baahsan iyo sumcad xumo kumashquushay.
Saraakiisha sarsare ee wayaanaha ayaa sanadihii ugu dambeeyayba kulug lahaa musuq maasuq baahsan iyo wax isdaba marin waxaana hada siwayn usoo shaac baxay ciidanka wayaanaha oo qaaday wadadii ay hayeen saraajiishii wayaanaha.